Dhaco tirtiray sawiro aad iPhone, oo aad rabto inaad dib u hesho hammuun? Ma ahan heshiis weyn hadda. Iyadoo jid toosan, weli iyaga ma doonan karo tayada asalka ah. Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows & Mac) waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo kabsado photos tirtiray ka iPhone in 3 siyaabood: si toos ah uga soo kabtaan iPhone, ka soo kabsado ah Lugood gurmad file ceshan ka iCloud gurmad file. Hubi xal faahfaahsan hoos ku qoran.
Arrimaha muhiimka ah in aad ogaato:
1. oo iPhone xayiran screen cad dhimashada ama hab kabashada halka dadka casriyeeyo iPhone in macruufka 9 , uma baahnid inaad u baahan tahay inuu ka soo kabsado sawiro ka iPhone hadda! Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in lagu hubiyo sida loo hagaajin iPhone screen cad dhimashada ama sida loo helo iPhone ka mid ah hab-kabashada . Waxaa hubaal ah, ka dib markii barashada siyaabaha, aad iPhone u rogman doonto hab caadi ah.
2. Haddii aad sawiro ka iPhone 6s, iPhone 6s Plus ama wax kale iPhone badiyay socda ee macruufka 9, waa in aad ku sawirnaa Photos app oo taga si folder Dhawaan masaxay si aad u hubiso in kuwan photos lumay waxaa ama ma yihiin. Haddii ay jiraan, in aad isla markiiba u celinaynaa karo. Haddii ay jiraan oo aan jirin, waa in aad raacdo siyaabaha hoos ku qoran inuu ka soo kabsado sawiro.
Sida aynu u maamuli kartaa inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka iPhone in 3 Siyaabaha
iPhone (macruufka 9 taageerayaan) Photo Recovery
Siinayaa saddex siyaabood oo dib u soo ceshano photos tirtiray ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Fiiro gaar ah: Wixii sawiro laga badiyay iPhone 4s iyo wixii ka sareeya, fadlan isku day in aad iyaga ka soo kabsado Lugood gurmad file ama iCloud gurmad file.
3 Solutions dib u soo ceshano Photos tirtiray ka iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5s / 5c / 4s / 4 / 3GS
1: Ladnaansho photos tirtiray iyadoo lagu eegayo aad iPhone
2: Ladnaansho photos tirtiray ay soo saarida gurmad Lugood
3: Ladnaansho photos tirtiray soo degsado iyo soo saarida gurmad iCloud
Qeybta 1: Ladnaansho photos tirtiray iyadoo lagu eegayo aad iPhone
Ka dib markii in hakad geliyay barnaamijka on your computer, waxa maamula. Markaas xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka. Markii barnaamijka ogaadaa aad iPhone, raac tilmaanta uu furmo in "Start Scan" aad ka baareyso iPhone.
Tallaabada 2 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawiro ka iPhone
Marka scan ka istaago, waxaad ku eegaan karo oo calaamadee dhammaan xogta la heli karo inuu ka soo kabsado in natiijada scan. Si aad u soo kabsado sawiro, aad ku eegaan karo wax kasta ee qaybaha Camera Roll, Photo Stream iyo App Photos. Iyaga Guudmar mid mid, iyo sax shayga aad rabto. Markaas riix Ladnaansho button iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Qeybta 2: Ladnaansho photos tirtiray ay soo saarida gurmad Lugood
Tallaabada 1 Dooro iyo Macdan gurmad Lugood ah
Ka dib markii socda barnaamijka, bedesho soo kabsado Lugood ee kaabta File adigoo gujinaya ikhtiyaarka ugu sareysa ee daaqadda. Markaas barnaamijka lagu ogaan doonaa oo dhan Lugood files gurmad jira on your computer oo wada bandhigaan aad ikhtiyaarka.
Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro iyo riix Start Scan badhanka si ay u bilaabaan soo saarida gurmad ah. Geedi socodka soo saarida aad qaadan doonaa qiyaastii 5 ilbiriqsi.
Tallaabada 2 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan aad sawiro iPhone
In natiijada scan soo bandhigay by Wondershare Dr.Fone ee macruufka, waxaad eegi kartaa oo dhan ka mid ah xogta recoverable by mid si faahfaahsan, sida sawiro, xiriirada, fariimaha, qoraalada, soo wac gasho oo dheeraad ah. Just sax wax kasta oo aad rabto in lagu jiro Xiisaha. Markaasuu iyaga ku badbaadin on your computer la mid ah oo kaliya mouse click ku Ladnaansho button.
Qeybta 3: Ladnaansho iPhone sawiro ka gurmad iCloud
Tallaabada 1 Download iyo Macdan gurmad iCloud faylka
Dooro habka soo kabashada oo ka mid ah ka soo kabsado iCloud File kaabta , oo markaas waxaad geli kartaa ID aad Apple iyo sirta ah si ay u gasho. Ka dib markii in, barnaamijka si toos ah u heli karaan dhammaan faylasha gurmad jira in aad xisaabta iCloud. Dooro mid aad rabto inuu ka soo kabsado photos iPhone ka si download oo soo saaro. Waxa aad qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah. Just sugnaa oo sii internet-ka ku xiran.
Marka scan la dhammeeyo, waxa aad heli kartaa oo ku eegaan waxa ku jira in aad gurmad iCloud si faahfaahsan. Wixii sawiro, waxaad eegi kartaa Camera Roll iyo App Photos. Iyaga Guudmar mid mid iyo sax shayga aad rabto. Markaas riix Ladnaansho button iyaga badbaadiya on your computer.
iPhone 6s (Plus) , iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, 5c iPhone, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS
oo dhan oo ay ku jiraan iPads iPad Pro, iPad Air, iPad mini bandhigay isha, iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad cusub, iPad 2, iPad 1
More Articles inay Xalliyaan iPhone Dhibaatooyinka aad u baahan tahay
Sida loo Recovery iMessage ka iPhone
Kabsado Khasaaray Photos ka macruufka 9 Qalabka
> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka iPhone